I-Galaxy M10, i-M20 kunye ne-M30 izakuhlaziya kungekudala kwi-Android Pie | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isamsung yaqala ukuba kwinqanaba elitsha eliphakathi kulo nyakaNgoJanuwari, iimodeli ezimbini zaziswa ngokusesikweni, i-Galaxy M10 kunye neM20. Kungekudala emva koko, inkampani yasishiya nemodeli yesithathu ngaphakathi kuyo, yintoni iGalaxy M30, enokubonwa njengeyona igqibelele kwezintathu ukuza kuthi ga ngoku.
Olu luhlu lweGalaxy M10, M20 kunye neM30 umangalisiwe xa ufika nge-Android Oreo kwintengiso, okubi ngakumbi. Ngethamsanqa, khange kuthathe xesha lide ukuba inkampani ibe nohlaziyo lwePie ye-Android ilungele izixhobo. Kuba kulindeleke ukuba kwiintsuku ezimbalwa izakwaziswa.
Nangona kungekho mntu uqonde kakuhle Isizathu sokuba uphawu lwaseKorea lusebenzise i-Android Oreoukulinda kufutshane. NgoJanuwari iimodeli zokuqala zoluhlu zafika, ke malunga neenyanga ezine sele belungile uhlaziyo. Ukongeza, sele sinawo umhla wokuphehlelelwa kwePie ye-Android kwezi Galaxy M10, M20 kunye neM30.
Iya kuba nge-3 kaJuni xa i-OTA izakuphehlelelwa ngokusesikweni zeefowuni. Khange kuthiwe ukuba iyakuba sisindululo sehlabathi, nangona kusenokwenzeka ukuba izakuqhubeka kwiimarike ezahlukeneyo njengoko iintsuku zihamba. Yeyona ixhaphakileyo kwezi meko. Kodwa akuyi kufuneka silinde ixesha elide kuzo zombini.
Umzuzu obalulekileyo weSamsung. I-middle-range yayo ithathe inyathelo elibalulekileyo kulo nyaka, ngakumbi ngenxa yokuba ezi Galaxy M10, M20 kunye neM30 zibe ngumzekelo kwelokuba zinokwenza iifowuni ngexabiso eliphantsi, kodwa zigcine ukubalula okuhle. Kungenxa yoko le nto bethengisa kakuhle kulo nyaka.
Ke ngaphezulu kweveki I-Android Pie iya kuqala ngokusemthethweni ukufika kwezi Galaxy M10, M20 kunye neM30. Ukuphehlelelwa okubalulekileyo kuluhlu oluphakathi. Kukwabasebenzisi baseSpain, apho i-Galaxy M20 ibithengiswa khona iinyanga ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Galaxy M10, M20 kunye neM30 kungekudala ziya kuba nePie ye-Android
I-Samsung patent i-smartphone esongelayo entsha: ngaba iya kuba yenye indlela kwiGolden Fold?